XOG: Guuleed oo hal arrin oo guul ku soo dhammaatay kala shaqeeyay Villa Somalia | Somalia News
XOG: Guuleed oo hal arrin oo guul ku soo dhammaatay kala shaqeeyay Villa Somalia
Madaxweynihii hore ee Galmudug C.kariin Xuseen Guuleed ayaa qeyb libaax leh ka qaatay in xilka Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya loo magacaabo Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ku heyn Mr. Guuleed.
Guuleed ayaa daaal xooggan ku bixiyay sidii xilkaas u heli lahaa shaqsi ka soo jeeda Beesha Habargidir gaar ahaan Jufada uu ka soo jeedo ee Sacad, wuxuuna arrintaas ka caawiyay in shaqsigaas la helo madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor oo geed gaaban iyo mid dheer u fuulay helista xilkaas.
Madaxweynaha Galmudug oo safar deg deg ah oo ujeedkiisa la shaacin ku gaaray 12-kii bishan magaalada Nairobi ayaa halkaas wuxuu kulan qarsoodi ah kula yeeshay Siyaasiga C/kariim Xuseen Guuleed, kaas oo arrimaha uu kala hadlayo loo badinayo iney qeyb ka ahayd magacaabista xilka Ra’iisal wasaaraha oo loo saarinayay Mr Guuled in xilkaas loo magacaabayo.
Madaxweynihii hore ee Galmudug C/kariim Xuseen Guuleed oo hadda ah musharax madaxweyne 2020/21 ayaa la sheegayaa inuu galaangal xooggan uu ku leeyahay siyaasadda dalka, wuxuuna hadda kulamo kala duwan oo dhanka siyaasadda ah ka wadaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Guuleed oo la aamisan yahay inuu ka mid yahay siyaasiyiinta mucaaradsan hanaanka shaqo ee Dowladda Farmaajo ayaa haddana dhanka kale muddooyinkii dambe wuxuu u muuqday mid hoos uga soo dhacayay ama dib uga gurtay xantaas, maadama uu bogaadiyay tallaabooyin dhowr ah oo Dowladda ay qaaday.
The post XOG: Guuleed oo hal arrin oo guul ku soo dhammaatay kala shaqeeyay Villa Somalia appeared first on Somali News Leader.
Previous articleDowlad ku hanjabtay in ay qaadi Doonto talaabo bur burin doonta Mareykanka
Next articleSNA convoy hit by landmine, soldiers injured in Dhusamareb